Author Topic: ဟာသဥာဏ်စမ်း အမေး/အဖြေ (Read 165770 times)
« Reply #20 on: March 28, 2011, 01:09:30 PM »
အေဆိုတဲ့လူက ဘီဆိုတဲ့လူကို တွေ့တယ် ...
ဘီက အေကို ´´ သား ´´ လို့ခေါ်တယ် ...
ဒါပေမယ့် အေရဲ့အမေက ဘီ မဟုတ်ဘူး ...
ဒါဆိုရင် အေက ဘီကို ဘယ်လိုပြန်ခေါ်/ထူးလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ ... Tongue
ယောက္ခမကြီး ယောက္ခမကြီး ယောက္ခမကြီး ဟိဟိဟိဟိ
ဟာသနှောထားတဲ့ ဥာဏ်စမ်းလေးပါလို့ .....
« Reply #21 on: March 28, 2011, 01:14:33 PM »
ဒီတခါတော့ ဆွေမျိုးဆက်ကြရအောင်လား ...
မေးခွန်းလေးက ဒီလိုပါ ...
အမေဖြစ်သလို သမီးလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ ...
ကဲ . ဘာကြောင့် အဲသလိုကြီး ဖြစ်သွားတာတုန်း ...
လူ့ဘောင်လောကမှာ ဒီလိုက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ
မရှိခဲ့ဘူးလို့ ကြားဖူးထားကြောင်း ...
မဟုတ်က ဟုတ်ကကို မေးတတ်တဲ့ .....
« Reply #22 on: March 28, 2011, 06:44:16 PM »
Quote from: zero0 on March 28, 2011, 01:09:30 PM
ဟုတ်ကဲ့ခည။ သားက ယောက္ခမကြီးလို့ မခေါ်ရင် နောက်တစ်မျိုးက သားရဲ့အရင်းထဲကပါမှာမို့ ဘူမှမနာအောင် သားက ယောက္ခမကြီးလို့ ခေါ်တာပါအူးအူးရယ်။ အူးအူးမကြိုက်ရင်နောက်မခေါ်တော့ပါဘူး။ ဟင့် ဟင့် ဟင့်
« Reply #23 on: March 28, 2011, 07:27:01 PM »
Quote from: zero0 on March 28, 2011, 01:14:33 PM
မြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာ ပုထုစဉ်လူသား အလောင်းတော်ဘ၀မှာ မိထွေးတော်ဂေါတမိရဲ့သားတော်စပ်ခဲ့ပြီး
ဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူပြီးနောက်တော့ မိထွေးတော်ဂေါတမိကိုတရားရေအေးတိုက်ကျွေးပြီး သံသရာမှလွတ်
မြောက်စေခဲ့လို့ သာသနာ့ဘောင်မှာတော့ မိထွေးတော်ဂေါတမိဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ သမီးတော် ပါ .........
« Reply #24 on: March 28, 2011, 07:37:16 PM »
အေ နဲ့ ဘီက သားအမိမဟုတ်ဘူးဆိုမှတော့ သားအဖဖြစ်နေလို့နေမှာပေါ့
ဒါပေမယ့် အေက ဘီကို ဘယ်လိုပြန်ခေါ်/ထူးမလဲဆိုတာတော့ မပြောရဲဘူး
နော်ကြာ ဘီနေရာကနေ ပြန်ထူးမယ့်သူတွေများနေမှာစိုးရတယ်
ဒီတော့ ကျနော်လည်း ယောက်ခမကြီးလို့ပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်
« Reply #25 on: March 29, 2011, 08:00:25 AM »
ဟုတ်ကဲ့ခည။ သားက ယောက္ခမကြီးလို့ မခေါ်ရင် နောက်တစ်မျိုးက သားရဲ့အရင်းထဲကပါမှာမို့ ဘူမှမနာအောင် သားက ယောက္ခမကြီးလို့ ခေါ်တာပါအူးအူးရယ်။ အူးအူးမကြိုက်ရင်နောက်မခေါ်တော့ပါဘူး။ ဟင့် ဟင့် ဟင့် Grin Grin Grin
၀မ်းနည်းသွားတဲ့ Grin Grin Grin
နော်ကြာ ဘီနေရာကနေ ပြန်ထူးမယ့်သူတွေများနေမှာစိုးရတယ် Cheesy
ဒီတော့ ကျနော်လည်း ယောက်ခမကြီးလို့ပဲခေါ်လိုက်တော့မယ် Grin
မဖြေတာက ဖြေတာထက်ပိုထိရောက်ပါတယ် ...
ကျွန်တော်လည်း ပြန်ထူးမယ့် သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်နေကြောင်း ...
ပျော်ရွှင်ရယ်မောကာ အသက်ရှည်ရှည်ဖြစ်ကြပါစေလို့ .....
« Reply #26 on: March 29, 2011, 08:28:09 AM »
Quote from: totegyi on March 28, 2011, 07:27:01 PM
ဂလိုကြီးကျမ်းကိုးနဲ့ ဖြေထားတာက ကျွန်တော့်အဖြေထက်ပိုကောင်းပါတယ် ...
ကွန်တော့်အဖြေကတော့ တစ်မျိုးဗျ ...
ဦးရွှေ+ဒေါ်ရွှေ၊ မောင်ရွှေ တို့ မိသားစုမှာ ဒေါ်ရွှေက ဆုံးပါးသွားပြီး ဖြစ်ပါတယ် ...
ဦးမြ+ဒေါ်မြ၊ မမြ တို့မိသားစုမှာတော့ ဦးမြက ကွယ်လွန်သွားပါတယ် ...
ဂလိုကြီး ခရောစင် ချစ်ကြိုက်ညားကြလေတော့ -
ဦးရွှေက မမြနဲ့ညားလို့ (မမြရဲ့အမေ) ဒေါ်မြက ဦးရွှေရဲ့ အမေဖြစ်သွားတယ် ...
ဒါ့အပြင် ဒေါ်မြက မောင်ရွှေရဲ့ မိန်းမဖြစ်ပြန်လေတော့ သားနဲ့စပ်တော့ ဒေါ်မြက ဦးရွှေရဲ့ သမီးလည်းဖြစ်ပြန်တယ်လေ ...
မောင်ရွှေက ဒေါ်မြနဲ့ယူလိုက်တော့ -
မမြက မိန်းမရဲ့သမီးဆိုတော့ သူ့သမီးပေါ့ ...
ဒါပေမယ်လည်း မမြကသူ့အဖေရဲ့မိန်းမဖြစ်ပြန်တော့ သူ့အမေပေါ့ ...
အဲဒီလိုက ကျွန်တော့် အမေးရဲ့ အဖြေပါပဲ ... လောကမှာ ဒီဖြစ်စဥင်္က ရှိနိုင်ပါတယ်နော့် ...
အားလုံးတစိမ့်စိမ့်တွေး ရယ်မောနိုင်ပါစေလို့ .....
« Reply #27 on: March 29, 2011, 08:59:14 AM »
ဗရုတ်သုတ်ခ . အဲ . ဗဟုသုတ ဖြစ်စေခြင်းငှာ မြန်မာစာလုံး/စကားအချို့ကို အာဖျံကွိလိုက်ပါတယ် ...
သတိထား ပြောဆိုရမယ့် စကားတွေပေါ့ ...
´´ လက်တစ်လုံးခြား မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ .´´
ကဲ . မသိဘဲ ပြောကြည့် ကောင်မလေးတွေက ရိုက်လိမ့်မယ် ... ဘာကြောင့်လဲ -
ဆိုလိုရင်းက အရှေ့ နဲ့ အနောက်က လက်တစ်လုံးပဲ ခြားတယ်လေ ... ဟုတ်/မဟုတ်သိချင်ရင် တိုင်းကြည့်ကြပါကုန် ... အဲ . ဒါပေမယ့် မောင်သုံည ပြောတာမယုံလို့ တိုင်းကြည့်တာတော့ မဖြစ်စေချင်ပါ ... ကိုယ့်ဖာသာ သိချင်လို့ တိုင်းကြည့်တာပါလို့ ပြောဦးနော် ... တော်ကြာ ကောင်မလေးတွေက မိတ်ဆွေတို့ကို မရိုက်ဘဲ ကျွန်တော့်ကိုပဲ စုချ (၀ိုင်းရိုက်) ကြကုန်ရင် နောင်မှာ ဒီလို ပေါက်ကရတွေရေးဖို့ မတတ်နိုင်ဖြစ်သွားဦးမယ်ဗျာ ...
ဂျမ်းပုံကတော့ ဒီလိုပြောခဲ့တယ် ... ´´ အရှေ့ ရှိရဲ့ သားနဲ့ အနောက်လုပ်ကြည့်ပါလား ... ပါးတောင် အရိုက်ခံရဦးမယ် . ဟင့် ´´
ဒီလို - ဂျမ်းပုံက ကြမ်းခဲ့တာကို သိတော့ ကျွန်တော်တော့ မပြောရဲပေါင် ... မသိမသာလေးပဲ မဒီကညာလေးကို အီကလာလုပ်ရင် မညီညာတိုင်းကြည့်ခဲ့တယ် ... ဟုတ်ပလားကွယ် ... ဒါပေမယ့် လက်တစ်လုံးဆိုပေမယ့် တိုင်းလိုက်မိတာက လက်မကြီးနဲ့ ...
ပျော်ရွှင်ခြင်းများ သင်တို့ထံကူးစက်ပါစေလို့ .....
« Reply #28 on: March 29, 2011, 09:04:17 AM »
ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ခံချင်သလား ... (အဲဒါက ပိုနာတာလား/ ပိုကောင်းတာလား ... )
တင်ပြအပ်ပါတယ်ရှင့် ... (ပြရင်ကြည့်မယ် ... )
« Reply #29 on: March 29, 2011, 01:48:34 PM »
ဒီတခါလည်း ဗရုတ်သုတ်ခ မေးလိုက်ဦးမယ် ...
မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ မရည်ရွယ်ပါ ... မေး/ဖြေသက်သက်သာဖြစ်ပါတယ် ...
ဒီမေးခွန်းက မသင့်လျော်ဟု ယူဆပါက ဖျက်ပေး/နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...